Daawo:Sheekh Umal 2008 “Ciidii Dastuur Ka Dhigata Xukun Gaalna Soo Raacda Waa Ka Baxday Diinta” – KHAATUMO NEWS
Daawo:Sheekh Umal 2008 “Ciidii Dastuur Ka Dhigata Xukun Gaalna Soo Raacda Waa Ka Baxday Diinta”
Shiikh Umal 20kii sano ee ugu danbeeyey wuxuu isaga kala gooshayey bari iyo galbeed, gabi dhaclayn fikradeed ayuu ku sugnaa, qofka doonaya ha booqdo oo kaliya YouTube, waxaad ugu tage is diidooyin khatartooda leh.
Haddii uu Shiikh Umal muxaadaro weyn ku qabanayo Muqdisho arrimo badan ayaa isweydiin leh, Shiikh Umal sidee u arkaa dawladan maxayse kaga duwan tahay dawladihii hore, waxaana jirtay muxaadaro uu kaga hadlayey Dastuurka Soomaaliya 2008 oo uu ku tilmaamay mid khatar ku ah shareecada Islaamka, isla Dastuurkii ayaa Soomaaliya lagu xukumaa sidee hadda u arkaa?.
Shiikh Umal sida muuqata xilliyo ayaa jirtay uu ku tilmaami jiray qofkasta oo ciidamada shisheeye la hawl gala gaalo oo ay tahay in halkooda lagu dilo, hadda sidee u arkaa madaxweyne Farmaajo oo ciidamada ajnabiga ahi ilaalinayaan, sidee xaalka Shiikh Umal yahay dhammaan xogahan iyo kuwo kale oo badan waa wax duuban. Haddii lagu eedeeyo arrimo badan oo dalka ka dhacay saamayn ayey ku lahaayeen oo uu ka gilgisho dhibtu waxay tahay goob YouTube la yidhaahdo ayey ceegaagaan.
Arrinse waa wax caqli gal ah in Shiikh Umal maalintaa Jimcaha ku sheego in uu afkaartii hore ka noqday kana toobad keenay, maantana ilayn waxaa Nabad galyadiisa sugi doona ciidamo ajnabiyee uu sheego in madaxdii horena ahayn murtadiin kuwa hadda joogaana ahayn bal ay yihiin umaraa Almuminiin, oo sidaa Shiikh Caadil Alkalbaaniga Sucuudiga iyo Caa’id Alqarani afkaartii hore sheego in ay duntay iyada oo ficil ahaan dhinaciisa Shiikha uga duntay hadana iclaamiya uun.
Haddii aanu Shiikhu sidaasi yeeli karin in uu iska joojiyo muxaadarada
Previous Post: Deg Deg Daawo::Shacabka Muqdisho Ka Hadlay Kulankii Farmaajo iyo Mucaaridka,
Next Post: Deg Deg Daawo:Muuse Biixi Oo Dacwad Lagaga Furay Dalka Sweden,